Haasaa isaan waltajjii seena qabeessa kana irratti taasisanii turan lammilee lamaanuu kan garaa raasee fi lamuu lammataa gochaan akkasii lammilee kana gidduutti akka hin dabalamne kan waadaa seensisee dha. Akka haasaa kabajamoo Dr. Abiy tti biyyi keenya yeroo ammaa kanatti wal-waraansa ykn waraana irratti xiyyeeffachuu kan hin qabneef hojii misoomaatiif xiyyeeffannoo guddaan kennamee jireenyi lammilee biyya kanaa akka fooyya’uuf hojjetamuu akka qabu dhaamsa dabarsaniiru. Daawwannaan kabajamoo Dr.Abiy kun walitti dhufeenya hawaasa lameeniitiif waltii bu’iinsa duraan uumamee ture irra jireessaan kan irraanfachiisee dha. Aadaa uummata Itiyoophiyaa keessaa baay’ee kan nama dhibu aadaa dhiifamaa fi garaa dhiifamaa qabaachuu dha. Sirna Federaalizimii biyyi kun hordofaa jirtu keessattin kan hin haalamne, akkaataa bulchiinsaaf tolutti sabaa fi sab-lammileen gara garaa daangaa dhaan addaan qoodamuun isaanii beekamaa dha. Haa ta’uyyuu malee daangaan kun walitti dhufeenya lammilee biyya kanaa irratti dhiibbaa kan geessisuu fi madda rakkoo walitti bu’iinsa biyya kanaa ta’uun akka irra hin jiraanne yeroo gara garaatti ni ibsama. Dhalli namaa akka horii bakka murtaa’e tokkotti hidhamee yeroon itti taa’u hafaa jira. Addunyaan kan dhala namaa hundumaa ta’aa jirti. Eenyullee mirga bakka fedhe jiraatee jireenya isaa geggeeffachuu qaba. Mirgi kun ammoo eenyuun iyyuu namarraa mulqamuu hin danda’u. Yeroo nuti keessa jirrutu walitti bu’iinsaaf hayyamamaa miti. Yerootu yeroo jaalalaati, yeroo itti biyyi tokkoof biyyi muuxannoo dhaaf wajjin jiraachuuf wal-barbaadanii dha. Yeroosaatu yeroo itti biyyi tokko biyya biraa malee jiraachuu hin dandeenyee dha.